ကိုယျတဈယောကျတညျးလဲ ဖွဈတယျ – Shinyoon
ကိုယျ့မှကိုယျ ဖွဈနတေဲ့လူကို ဆကျပွီး မရှာတော့ဘူး ။ ကိုယျတဈယောကျတညျးလဲ ဖွဈတယျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ပဲ ဘဝကို ဆကျပွီး လြှောကျတော့မယျ ။တဈယောကျတညျးလညျး အဆငျပွပေါတယျ ကြှနျမ . . . မှီခိုတတျတဲ့စိတျကို အသသေတျလိုကျပါပွီ ကိုယျ့ကို ပြျောအောငျထားနိုငျမယျ့လူတှမေရှိတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြျောအောငျပဲ နတေတျအောငျနတေယျ
တှယျတာတတျတာ မကောငျးဘူးလေ ဒဏျရာမြားစတေယျ ကိုယျက တှယျတာလလေေ ပိုပွီး တနျဖိုးမထားလလေပေဲ ဒီလိုလူတှပေဲ မြားပါတယျ သူတှယျတာလှနျးပါလား ငါ နဲနဲလေး ဆငျခွငျမှဆိုတဲ့အတှေးတှထေကျ ငါ ဘာလုပျလုပျ သူခှငျ့လှတျလိမျ့မယျဆိုတဲ့ အတှေးတှပေဲ ရှိတတျကွတာ မြားတယျ ဆကျပွီး မတှယျတာခငျြတော့ဘူး
မြှျောလငျ့တတျတဲ့ စိတျကိုလဲ ထိနျးခြုပျထားပါတယျ မြှျောလငျ့ထားသလို ဖွဈမလာတဲ့အခါ ကိုယျမြှျောလငျ့သလောကျ ကိုယျ့ပဲ နာကငျြခံစားရတာ ကတိတဈခုခုပဲဖွဈဖွဈ အနာဂတျကိုပဲဖွဈဖွဈ ကွိုတှေးပွီး စိတျကူးတှေ ယဉျနမေိတဲ့အခါ ဖွဈမလာတတျတာတှပေဲ ကွုံရတာမြားလာတော့ ဆကျပွီး မြှျောလငျ့ထားရမှာကို ကွောကျတတျလာတာပါ
အရမျးကွီး မခဈြပွတော့ဘူး သူမှ သူဖွဈနတေဲ့ စိတျ သူမရှိရငျ မဖွဈဘူးဆိုတဲ့ ဝနျခံခကျြတှကေ နားမလညျတဲ့အတှကျ ပွနျပွီးအလေးထားခံရမယျလို့ မထငျပါနဲ့ နားလညျတဲ့လူက နားမလညျတာပါပဲ တနျဖိုးဆိုတာ တဈခါတဈရံ ပိုငျဆိုငျတဲ့လူရဲ့ လကျထဲမှာပဲ ရှိနတေတျတာလေ ။
ကိုယျ့ကို ပြျောအောငျထားမယျ့လူကို မရှာတော့ဘူး ကိုယျပြျောဖို့အတှကျ ကိုယျ့မှာပဲ တာဝနျရှိပါတယျ ကိုယျပြျောအောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ နတေတျဖို့လိုတာပါ ။ပွီးတော့ ကိုယျ့ကိုနာကငျြစတေဲ့လူတှကေို ဘဝထဲမှာ မထားတော့ဘူး ဆကျပွီး ဆှဲမထားတော့ဘူး
ငှကျကလေးကို လှတျလိုကျသလိုပဲ တောငျးဆုတဈခုပဲ ပွုပါတယျ ရှငျလဲ လှတျလပျသလို ကြှနျမလဲ လှတျလပျပါစပေေါ့ အရာအားလုံးကို ပေါ့ပေါ့လေးတှေးတာ မဟုတျပဲ ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ တှေးတော့တဲ့အခါ လိုအပျတဲ့အရာလား မလိုအပျဘူးလား မလိုအပျရငျ ရငျဘတျထဲ မထညျ့တော့ဘူး ကိုယျပဲ ပငျပနျးရတာလေ
တဈယောကျတညျး နတေတျအောငျနပေါတယျ ကိုယျမှ ကိုယျဖွဈနတေဲ့လူကိုလဲ ဆကျပွီး မမြှျောတော့ဘူး ကိုယျ့အနားမှာ ကိုယျရှိနတေယျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ဘဝမှာ ပြျောအောငျနပေါတယျ
ဘဝမှာကိုယျ့အမှားတှကွေောငျ့ နောငျတတှရေပွီး နာကငျြခဲ့ရတာထကျစာရငျ တဈပါးသူရဲ့လုပျရပျတှကွေောငျ့ နာကငျြခဲ့ရတာ မြားတယျလေ တဈယောကျတညျးနတေဲ့အခါ တဈခါတဈရံ နညျးနညျးလေး အထီးကနျြရုံကအပ ကနျြတာ အဆငျပွပေါတယျ ဒဏျရာတှပေေးမယျ့လကျတှလေဲ မရှိတော့ဘူး နာကငျြစရာပေးမယျ့လူတှလေဲ မရှိတော့ဘူး တှယျတာတတျ မြှျောလငျ့တတျတဲ့ ကြှနျမအတှကျတော့ တဈယောကျတညျးက ပိုပွီး အဆငျပွပေါတယျ ။လူအမြားကွီးကွားမှာ နာကငျြနရေတာထကျစာရငျ တဈယောကျတညျးအထီးကနျြနရေတာကိုပဲ ရှေးတယျ သိပျပွီး သိမျငယျစရာ မလိုတော့ဘူး ။
ကိုယ့်မှကိုယ် ဖြစ်နေတဲ့လူကို ဆက်ပြီး မရှာတော့ဘူး ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲ ဘဝကို ဆက်ပြီး လျှောက်တော့မယ် ။တစ်ယောက်တည်းလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်မ . . . မှီခိုတတ်တဲ့စိတ်ကို အသေသတ်လိုက်ပါပြီ ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်မယ့်လူတွေမရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်အောင်ပဲ နေတတ်အောင်နေတယ်
တွယ်တာတတ်တာ မကောင်းဘူးလေ ဒဏ်ရာများစေတယ် ကိုယ်က တွယ်တာလေလေ ပိုပြီး တန်ဖိုးမထားလေလေပဲ ဒီလိုလူတွေပဲ များပါတယ် သူတွယ်တာလွန်းပါလား ငါ နဲနဲလေး ဆင်ခြင်မှဆိုတဲ့အတွေးတွေထက် ငါ ဘာလုပ်လုပ် သူခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေပဲ ရှိတတ်ကြတာ များတယ် ဆက်ပြီး မတွယ်တာချင်တော့ဘူး
မျှော်လင့်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုလဲ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကိုယ်မျှော်လင့်သလောက် ကိုယ့်ပဲ နာကျင်ခံစားရတာ ကတိတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ် အနာဂတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတွေးပြီး စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိတဲ့အခါ ဖြစ်မလာတတ်တာတွေပဲ ကြုံရတာများလာတော့ ဆက်ပြီး မျှော်လင့်ထားရမှာကို ကြောက်တတ်လာတာပါ
အရမ်းကြီး မချစ်ပြတော့ဘူး သူမှ သူဖြစ်နေတဲ့ စိတ် သူမရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ ဝန်ခံချက်တွေက နားမလည်တဲ့အတွက် ပြန်ပြီးအလေးထားခံရမယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ နားလည်တဲ့လူက နားမလည်တာပါပဲ တန်ဖိုးဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတတ်တာလေ ။
ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်ထားမယ့်လူကို မရှာတော့ဘူး ကိုယ်ပျော်ဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ် ကိုယ်ပျော်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ နေတတ်ဖို့လိုတာပါ ။ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့လူတွေကို ဘဝထဲမှာ မထားတော့ဘူး ဆက်ပြီး ဆွဲမထားတော့ဘူး
ငှက်ကလေးကို လွတ်လိုက်သလိုပဲ တောင်းဆုတစ်ခုပဲ ပြုပါတယ် ရှင်လဲ လွတ်လပ်သလို ကျွန်မလဲ လွတ်လပ်ပါစေပေါ့ အရာအားလုံးကို ပေါ့ပေါ့လေးတွေးတာ မဟုတ်ပဲ ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ တွေးတော့တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အရာလား မလိုအပ်ဘူးလား မလိုအပ်ရင် ရင်ဘတ်ထဲ မထည့်တော့ဘူး ကိုယ်ပဲ ပင်ပန်းရတာလေ
တစ်ယောက်တည်း နေတတ်အောင်နေပါတယ် ကိုယ်မှ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုလဲ ဆက်ပြီး မမျှော်တော့ဘူး ကိုယ့်အနားမှာ ကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဘဝမှာ ပျော်အောင်နေပါတယ်
ဘဝမှာကိုယ့်အမှားတွေကြောင့် နောင်တတွေရပြီး နာကျင်ခဲ့ရတာထက်စာရင် တစ်ပါးသူရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နာကျင်ခဲ့ရတာ များတယ်လေ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ နည်းနည်းလေး အထီးကျန်ရုံကအပ ကျန်တာ အဆင်ပြေပါတယ် ဒဏ်ရာတွေပေးမယ့်လက်တွေလဲ မရှိတော့ဘူး နာကျင်စရာပေးမယ့်လူတွေလဲ မရှိတော့ဘူး တွယ်တာတတ် မျှော်လင့်တတ်တဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ တစ်ယောက်တည်းက ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ် ။လူအများကြီးကြားမှာ နာကျင်နေရတာထက်စာရင် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတာကိုပဲ ရွေးတယ် သိပ်ပြီး သိမ်ငယ်စရာ မလိုတော့ဘူး ။
အဆငျ့အတနျးဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယျပတေံနဲ့တိုငျးပွီး ဘယျလို အဓိပ်ပါယျသတျမှတျကွသလဲ